Galitaanka Meltem Katlı Ayaa Soo Gaadhay Howlaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaIsgaarsiinta Meltem Katlı Ayaa Soo Galeysa Adeeg
Isgaarsiinta Meltem Katlı Ayaa Soo Galeysa Adeeg
16 / 03 / 2020 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Isgoyska Meltem Katlı, oo ay dhistay dowladda hoose ee Antalya ee ku baahsan mashruuca Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3-aad, ayaa la hawl galiyay. Duqa Magaalada Muhittin Böcek ayaa waday wadadii ugu horeysay ee ka dambeysa giraangiraha xafiiska ee isgoysyada.
In kasta oo ay Dawladda Hoose ee Magaalada Antalya ay ku sii wadayso Mashruuca Nidaamka Raadinta Heerka 3-aad xawaare buuxa, dhismaha Meltem Katli Junction ee Dumlupınar Boulevard, oo ah mid ka mid ah heerarkii ugu muhiimsanaa ee mashruuca, ayaa la dhammeystirey. Isgoyska dhererkiisu yahay 662 mitir oo leh saddex dabaq oo leh dabaqyo dhaadheer leh ayaa bil kahor billowday qorshihii la qorsheeyay. Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek ayaa baaritaankii ugu dambeeyay ka sameeyay isgoyska dabaqa ka hor inta aan loo furin gaadiidka. Madaxweyne Böcek, oo isagu ka danbeeya giraangiraha gaariga maamulka, ayaa markii ugu horreysay ka fuushay isgoyska dabaqa.
TRAFFIC WAXAA WAQTIGA AH
Isagoo xusay in Meltem Katl that Junction uu gacan ka geysan doono taraafikada Antalya, Duqa magaalada Muhittin Böcek ayaa yiri, “3. Mashruuca Nidaamka Tareenka Marxaladda, kala-guurka u dhexeeya Jaamacadda iyo Meltem waxaa loo samayn doonaa sidii marin-hoosaad. Mashruucu wuxuu qaadanayaa 1 sano qodista dhulka hoostiisa awgood. Markii aan xafiiska la wareegnay, waxaan u qorsheynay marin-biyoodka sidii xad-dhaaf. Labadeenaba waxaan badbaadinay waqti waxaan badbaadinay 9 milyan oo liras. Waxaan sidoo kale helnay 2 dariiqo oo kale oo hoose. Dib u eegisteyda halkan Janaayo, waxaan is idhi buundada waa la furi doonaa dhamaadka bisha Abriil. Waxaan bilownay Maarso, xitaa kahor ballanteenna. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo qandaraasle iyo asxaabteyda sida ay u kobceen maalin kahor. Waxaan rajeynayaa in dariiqayagu u fiicnaado qof walba.
ANIGU WAA 182 MILLION LIRAS
Isagoo xusuusinaya in Mashruuca Heerka 3aad ee Wadada Tareenka uu yahay 24 kiiloomitir guud ahaan, Madaxweynaha Böcek wuxuu yiri, “Waxaan ku bixinay 8 milyan liras mashruucan ilaa maalintii aan helnay mazba 182 April. Ilaa iyo subaxnimada berri, waxaan bilaabeynaa inaan ka shaqeyno waaxda Cilmi-baarista Tacliinta ee Meltem Mahallesi. Si dhakhso leh ayaan u wadaynaa.
Xad gudubka ka socda Isweydaarsiga Köseköy
Jaamacadda Mediterranean ee Meltem Gate waa Cusboonaysiin
Fuzuli Storey Junction waxay tiraahdaa maalmaha furitaanka
Furitaanka Xuduudka Xuduudaha Xuduudaha
Kormeerka Kombiyuutarada ee Turgutlu ee Jarjaadka Isku-dhajinta ah
Shaqo xumo ka timaada Danube iyo 30 August Storey Junction
Fuzuli Katlu Junction ayaa la furay Sabtida
Ugu Dambeyn Isgoysyada Waddooyinka ee Xal u keena 7 Isgoysyada laga dhisay Kocasinan Boulevard…
Madaxweyne Steele, Iskuduwaha Joogitaanka Terminal Storey ee Lagu Helay Baaritaan
Caydi-i Milliye Dhameystey 70 Boqolkiiba Goob Joog ah
Iska caabinta Shaqaalaha Haystapaş ee Qodayaasha!
Maanta taariikhda: 17 Maarso 1925